China efere feeder emepụta na suppliers | Onye na-eme brik
O kwesịrị ekwesị maka ịnyefe ihe ndị siri ike. Ngwunye ígwè nwere ike ịka mma ịnagide mmetụta na ọkọ nke ihe siri ike karịa teepu nrapado. Na-akwagharị site na a7.5 /11kw moto, site reducer ịnyagharị yinye belt ịga n'ihu na uniformly na a ala na-agba, na site na ukpụhọde ọdụ tensioning ngwaọrụ, ikesiike na ịgbanwe ihe yinye belt na sprocket ka n'ụzọ ziri ezi ntupu, mezue nzube nke erute ihe.
Igwe a dị mma maka ụlọ ọrụ ihe ụlọ dị ka mines, chemicals, brik, taịlị wdg. Ọ na-ewepụsị ihe ndị na-esighi na bins nchekwa ma ọ bụ ogige na-ebuga ha na akụrụngwa mgbada. Ọ na-agba ọsọ nke ọma, nwere arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya, ma dịrị mfe iji rụọ ọrụ ma debe ya.
Atụmatụ na ụkpụrụ ya
Igwe nri efere nwere ụdị mgbakọ abụọ (ntinye): nnyefe aka ekpe na aka nri. Usoro nnyefe n'akụkụ aka nri nke ihe na-agba ọsọ bụ nnyefe ziri ezi. Kama nke ahụ, ọ bụ aka ekpe aka ekpe (zukọtara dịka ihe onye ọrụ chọrọ). Ọ tumadi ekewetde nke njikọ, reducer, nnyefe akụkụ, mbanye akụkụ, yinye belt, obimgbalielu akụkụ na n'akụkụ ndị ọzọ.
Tupu echichi, akụkụ nke ọ bụla kwesịrị ịdị ọcha, zuru oke ma lelee ma akụkụ ahụ emebiri, nkwadebe ngwa ọrụ achọrọ. Mgbe echichi, na-eji ngwa ngwa na-ebu ụzọ mee ka ndị ọbịa na akụkụ nnyefe na-atụkwasị na ntọala ahụ, na-agbanwe usoro ntụgharị ọ bụla, na-eme ka ihe nrụpụta na-ebugharị ma na-ebugharị n'otu ọkwa ahụ, edozi ya mgbe emechara ya niile. Gbanye ihe nkedo na-emegharị emezi iji dozie akụkụ ahụ nke na-eme ka esemokwu nke agbụ abụọ ahụ nwee ike gbanwee. The yinye belt meshes na sprocket ejikari, na lubricating akụkụ na-agbara ndi mmanu dị ka achọrọ.
Nke gara aga: Ugboro abụọ aro igwekota
Osote: Igbe Nri